China Galvanized Steel Bracket For Frames fekitori nevagadziri |Zhanzhi
Mabhuraketi esimbi akafukidzwa nemamiriro ekunze anofanirwa kugashira dip rinopisa remarata ekudzivirira kubva mukuora.Makomba akacherwa kumabhuraketi esimbi anowanzo kucherwa 2mm akakura pane saizi yebhaudhi iri kushandiswa.Mabhuraketi esimbi anogona kugadzirwa kubva muchikamu chakakura chezvikamu zvesimbi, zvinonyanya kuzivikanwa ndezve (FMS) Flat Mild Steel, (EA) Equal Angle kana (UA) Unequal Angle.
1) Material: sezvinodiwa nemutengi.
2) Saizi: sezvinodiwa nemutengi
3) Surface kurapwa: galvanized, perforated, powder coated, kana sezvinodiwa nemutengi.
4) Packing: yakajairika gungwa-yakakodzera kurongedza
Mabhuraketi esimbi anouya mune ese maumbirwo uye saizi uye anowanzo gadzirwa akagadzirirwa saiti-chaiyo applications.
Isu tinochengetera huwandu hwakajairwa hwemabhuraketi anonyanyo tsvagwa kuti ashandiswe mukuvaka dzimba dzekugara, kusanganisira asi kwete kugumira ku:
* Angle mabhureki muhukuru hwakasiyana hwekutakura kune mutakuri zvinongedzo
* Server mabhureki
* Apex mabhureki
*Dwarf wall brackets
* Pergola mabhureki
* Nhanho dzekutsika mabhureki
* Tumira rutsigiro runokurudzira
Simbisa basa rako kuti uwedzere kuchengetedzwa neaya Galvanized Corner Braces.Yakakwana kune yakarapwa matanda uye yemukati / yekunze maapplication.Inowedzera simba kumakona emagonhi, zvipfuva, fenicha, zvidzitiro, windows uye mamwe maapplication.Zvikururu zvinotengeswa zvakasiyana.
* Yekushandisa kusimbisa flat surface yekurudyi kona majoini
* Yebhokisi, chipfuva uye fenicha kuvaka kana kugadzirisa
* Galvanized kupedzisa kwekunze kwekushandisa
* Countersunk dhizaini inobvumira zvibatiso zvemusoro zvakapfava kuti zvigare zvakapfava nezvinhu
① Kuvaka Kwakasimba KweSimbi Yakagadzirwa
Kuvakwa kwesimbi kwakagadzirwa kunoita kuti kona iyi bhandi ive yakasimba uye yakasimba sarudzo yekusimbisa makona.
② Countersunk Dhizaini Inosimudzira Flathead Screws
Countersunk Dhizaini maAccents Flathead Screws
③ Yakagadzirwa Kuti Isimbise Kurudyi Kona Majoini
Iyo L chimiro cheiyi kona brace inoita kuti ive yakanaka yekusimbisa kona yekona yekurudyi neyakafuratira.
Kuiswa kwesimbi bracket kunosanganisira simbi mafuremu / zvemagetsi / mudziyo / otomatiki / maindasitiri midziyo simbi inotsikisa hardware zvikamu.
*Isu tinoziva nezvemusika uye tine vatengi vakawanda
*Tine mapazi makumi maviri+ nemafekitori matanhatu